Ungasakha Kanjani Isikhangiso se-Snapchat | Martech Zone
Ungasakha Kanjani Isikhangiso se-Snapchat
NgoMsombuluko, Septemba 26, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 UTaylor Chrisman
Eminyakeni embalwa edlule, Snapchat ikhule ngokulandela kwayo yaba ngaphezu kwezigidi eziyi-100 emhlabeni jikelele ngamavidiyo angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane eziyishumi abukwayo ngosuku. Njengoba kunenani eliningi labalandeli kulolu hlelo lokusebenza nsuku zonke, kuyamangaza ukuthi izinkampani nabakhangisi bathutheleka eSnapchat ukuzokhangisa ezimakethe zabo ezibhekiswe kuzo.
Ama-Millennials njengamanje amele ama-70% abo bonke abasebenzisi ku-Snapchat Njengoba abathengisi basebenzisa imali engaphezulu ngama-500% kumillennial kunabo bonke abanye abahlanganisiwe, umthelela abanawo awunakuphikwa. Ngeshwa, izinkampani zisazama ukumaketha ezinkulungwaneni zeminyaka njengoba zenzile ezizukulwaneni ezindala; kodwa-ke, njengazo zonke izizukulwane, izinkulungwane zeminyaka zinezidingo ezithile kanye nezidingo abadayisi abadinga ukuziqonda ukuze baphumelele emikhankasweni yabo.
Izingosi zokuxhumana ezifana noFacebook no-Instagram bezilokhu zisebenzisa isizinda sazo esikhulu sabasebenzisi ukunxenxa imikhiqizo efuna ukukhangisa iminyaka manje. Yize i-Snapchat ibambe isikhashana kokuphambili kokukhangisa, uhlelo lokusebenza oludumile manje luvumela wonke umuntu kusuka ezinkampanini ezinkulu kuya kumabhizinisi endawo ukuthi azikhangise endaweni yesikhulumi.
Kunezindlela ezintathu eziyinhloko lapho imikhiqizo ingasebenzisa iSnapchat ukufinyelela amakhasimende angaba khona: Izikhangiso ze-Snap, ama-Geofilters axhasiwe, namalensi axhasiwe. Phakathi kwalezi zinketho ezintathu, izinkampani zinenkululeko enkulu yokudala yokuthi zifuna ukubeka kanjani umkhiqizo wazo ngokususelwa kumthengi wazo.
Inketho Yokukhangisa 1: Izikhangiso ze-Snap
Izikhangiso ze-Snap zingamasekhondi ayi-10, izikhangiso ezeqekayo ezifakwe phakathi kwezindaba ze-Snap. Ama-Snapchatters angaswayipha lapho ebuka isikhangiso sevidiyo enwetshiwe noma i-athikili ukuthola ulwazi oluthe xaxa. Amathuba ukuthi uke wazibona lezi zikhangiso kumugqa wesikhathi wendaba yakho, kepha uzidala kanjani?
Ezinkampanini ezinkulu, i-Snapchat igcina le nketho yokukhangisa kuphela kulabo abanezinketho ezinkulu zokusebenzisa imali zokukhangisa. I-Snapchat ineqembu lozakwethu ongaxhumana nabo nge-imeyili ku- PartnerInquiry@snapchat.com.
Inketho Yesibili Yokukhangisa: Ama-Geofilters axhasiwe
Ama-geofilters axhasiwe yizikrini ezingaswayipha ongazibeka ngaphezu kwe-Snap ngokususelwa endaweni yakho. Lesi sici esisebenzisanayo sinikeza abakwa-Snapchatters ithuba lokukhombisa abalandeli babo ukuthi bakuphi nokuthi benzani. Ngokuvumelana ne Idatha yangaphakathi ye-Snapchat, iGeofilter eyodwa kaZwelonke exhasiwe ifinyelela kuma-40% kuye kuma-60% ama-Snapchatters ansuku zonke e-US. Njengomphumela walokhu kufinyelela okubanzi nomthelela, i-Snapchat isiphenduke inketho yokukhangisa ekhanga kakhulu ezinkampanini ezinkulu.
Noma kunjalo, ama-Geofilters awakhawulelwe ezinkampanini ezinkulu. Ngoba lezi zikhangiso kulula ukuzidala, sezithandwa kakhulu kumabhizinisi amancane nakubantu ngabanye.Noma ngabe uqhuba umkhankaso kazwelonke wokukhangisa noma umane nje ubamba iphathi yosuku lokumangala yomngane wakho, ama-Geofilters axhasiwe ayindlela enhle kakhulu yokuxhumana nomhlaba .
Ukwakha i-Geofilter exhasiwe
Design - Lapho uqala ukuklama i-geofilter yakho online, uzohlangabezana nezinketho ezimbili. Ungakhetha i- “Use Your Own”, lapho uzakhela khona owakho umklamo kusuka ekuqaleni usebenzisa i-Photoshop noma izifanekiso ze-Illustrator ezinikezwe yi-Snapchat. Noma, unga "Dala ku-Inthanethi" bese ukhetha kusuka kuzinketho zokuhlunga ngokuya ngomcimbi (ie usuku lokuzalwa, imikhosi, imishado njll). Kungakhathalekile ukuthi ukhetha ini, qiniseka ukuthi ufunda i- Izikhombandlela Zokuhambisa ngokucaciswa kumugqa wesikhathi, imithetho, kanye nezidingo zosayizi wesithombe!
Map - Esigabeni sokumepha, uzocelwa ukuthi ukhethe ibanga lesikhathi lapho isihlungi sakho sizoba bukhoma .. Njengomthetho, i-Snapchat ayikuvumeli ukuhlunga ukuthi kube bukhoma izinsuku ezingaphezu kwezingu-30. Ngesikhathi sesigaba sokwenza imephu, uzokhetha nendawo nendawo lapho i-geofilter yakho izotholakala khona. Mane nje umise “uthango” ebalazweni ukuze ubone ukuthi i-geofilter yakho izobiza malini ngokususelwa kububanzi bayo.
Ukuthengwa - Ngemuva kokuklama nokwenza imephu i-geofilter yakho, uzoyithumela ukuthi ibuyekezwe. I-Snapchat izophendula ngokweqile kungakapheli usuku olulodwa lwebhizinisi. Ngemuva kokuvunyelwa, thenga iGeofilter yakho kuwebhusayithi ye-Snapchat bese uyilinda ukuthi ibukhoma!
Inketho Yokukhangisa 3: I-Lense exhasiwe
Inketho yesithathu yokukhangisa ye-Snapchat ukuthi imikhiqizo ingayisebenzisa yi-Sponsored Lense. Ilensi iyisici sokuqashelwa kobuso ku-Snapchat esenza ukuthi ubuciko bokudala bube bushelelezi ngaphezulu kobuso bomsebenzisi. Lawa malensi ashintsha nsuku zonke futhi ahleliwe futhi ahloselwe njengokufunwa yi-Snapchat.
Ngenkathi iningi lalawa malensi lenziwa yi-Snapchat, izinkampani zingakha futhi zithenge amalensi ngezinhloso zokukhangisa. Kodwa-ke, ngoba amalensi axhasiwe abiza kakhulu ukuthenga, ngokuvamile sibona amalensi wemikhiqizo emikhulu efana neGatorade noma iTaco Bell.
Yize kungazwakala kuwubulima ukuchitha u- $ 450K - $ 750K ngosuku emkhankasweni we-Snapchat, izinkampani ezinkulu zikhombisile ukuthi ukutshala imali kulensi exhasiwe kukhokha kakhulu. “ISuper Bowl Victory Lense” kaGatorade, yadlalwa izikhathi ezingaphezu kwezigidi ezingama-60, eqhosha ngokubukwa okuyizigidi eziyi-165! Ngenxa yalokhu, iGatorade yabona ukwanda ngo-8% kwezinjongo zokuthenga.
Ngokuya ngalezi zinombolo, kusobala ukuthi amandla ama-Sponsored Lens ayamangalisa. Ngenxa yethegi lentengo enkulu elihlotshaniswa nabo, i-Snapchat inqunyelwe amalensi axhasiwe kumikhiqizo emikhulu enezabelomali ezibalulekile. Kodwa-ke, uma kwenzeka une- $ 450K- $ 750K ilele futhi ufuna ukwenza i-Sponsored Lense, xhumana nanoma iyiphi Abalingani bokukhangisa be-Snapchat noma ubathumele i-imeyili ku- PartnerInquiry@snapchat.com. Ozakwethu bazokusiza kuzona zonke izinyathelo zesu lomkhankaso ukuhlinzeka ngeziphakamiso zokudala futhi baphendule noma yimiphi imibuzo ongaba nayo ..
Ngesisekelo sayo esikhulu somsebenzisi nezinketho zokukhangisa zokudala, i-Snapchat ikhombise ukuthi iyipulatifomu ewusizo kakhulu ezinkampanini zabo bonke ubujamo nobukhulu bokuxhumana nezithameli zazo ezibhekiswe kuzo. Uma uhlela umcimbi noma ukhipha umkhiqizo omusha, cabanga ngalezi zinketho ezingenhla bese uqala ukubona ukuguqulwa kuphakama!
Tags: Izinkulungwane zeminyakaqhafaza izikhangisoizikhangiso ze-snapchatukukhangisa kwe-snapchatsnapchat geofilteri-lens ye-snapchatizikhangiso ze-snapchat snapama-lens axhaswe nge-snapchat
UTaylor Chrisman uyingxenye yethimba Lokumaketha Okuqukethwe e Ukumaketha Kwe-Digital Digital. Unentshisekelo yokuxoxa izindaba zomkhiqizo ngokusebenzisa okuqukethwe okubandakanyayo nokubandakanyayo nezinkundla zokuxhumana.
UTaylor ungumpetha eNyuvesi yaseSan Diego wenza izifundo zeMarketing.
Ungakwenza Kanjani Ukushintsha Ukuhamba Kokusebenza Kwakho Komkhiqizo Okhuphukile
Jan 27, 2017 ku-3: 33 AM
Bengizibuza ukuthi ngabe unolwazi lokuthi ungawakha kanjani ama-lens we-Snapchat, iziphi izinto ezithambile abazisebenzisayo? mhlawumbe ungahle wazi.